Xirmadan xiisaha leh ee Broadband-ka Virgin iyo TV-ga 4K ee Bilaashka ah waa Heshiiskii Jimcaha Madow ee laga yaabo inaad seegtay - 【Isbarbardhigga】 2022
Xirmadan Epic ee Broadband-ka Virgin iyo TV-ga 4K ee Bilaashka ah waa Heshiiskii Jimcaha Madow ee laga yaabo inaad seegtay
Sidee ahaa Jimcihii Madow? Ma heshay iPadka cusub, taleefoonnada gacanta ee bilaa-waayirka ah, iyo kabaha kabaha ee aad jeceshahay? Mise waxaad ka dhigaysaa baaruuddaada engegan si aad u aragto haddii heshiisyada Cyber ​​​​Isniinta ay ku badbaadin doonaan xitaa in ka badan?
Hal heshiis oo laga yaabo in la seegay usbuuca axada ayaa ah heshiis weyn oo ku saabsan isgaarsiinta Virgin Media.
Waxaan dhahnaa "yar"...soo jeedintaan runtii waa mid aad u ballaaran, waxay la socotaa qorshahaaga internetka oo ku siinaya 4-inch 43K TV LG gabi ahaanba bilaash ah!
Isku qor xirmo Media Virgin ah, oo ay ku jiraan mega broadband, 195+ channels TV premium, iyo qorshaha taleefoonka todobaadka todobaadka, kahor saqda dhexe ee Isniinta, waxaad sidoo kale heli doontaa TV-gan 4K qiimihiisu ka badan yahay € 350. .
Iyada oo la dooranayo afar qorshe, laga bilaabo € 59 bishii, waxaan haynaa faahfaahinta waxa aad ka hesho hoos. Oo haddii aadan jeclayn TV-ga lagu soo bandhigay, ama haddii aad horay u iibsatay mid ka mid ah heshiisyada TV-ga ugu fiican Jimcaha Madoow ama Cyber ​​​​Isniinta, waxaad dooran kartaa inaad ka faa'iidaysato 250 deyn ah beddelkeeda.
Virgin Media TV Jimcaha Black Friday iyo Heshiisyada Broadband:
Miyaa la heli karaa xarig-faneed weyn oo bikrad ah oo ku yaal aaggayga?
Qiyaastii 55% qoysaska UK waxay heli karaan xawli-socod Broadband ah oo Virgin ah. Aad bay u fududahay in la ogaado inaad ku jirto boqolleydaas - u tag boggayaga heshiisyada Broadband ee Virgin Broadband, geli sibka koodka meesha uu ku yaal (ee bogga sare ee bogga) iyo haddii heshiisyadu muujinayaan. Sida la heli karo, waad fiicantahay inaad tagto.
Haddii aanad natiijooyin helin, tag boggayaga heshiisyada ballaadhan ee ballaadhan oo samee isla wax la mid ah si aad u aragto haddii aad ka heli karto fidiyaha fidsan ee aadka u degdega ah bixiye kale, sida BT fiber broadband.
Waan ka xunnahay, mareegta Virgin waxay leedahay soo jeedintan waqti xaddidan waxaa loogu talagalay macaamiisha cusub oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax khalad ah in la isku dayo in la helo qayb ka mid ah pie, sidaas darteed haddii aad hore u tahay macmiilka Broadband ah Virgin ah, waxaan kuu soo jeedinaynaa in aad la xiriirto adeegga macaamiisha ka hor inta aadan isku dayin in ay dalbadaan.
Isbarbardhigga Heshiisyada Balaadhan ee Maanta ugu Wanaagsan: